नीलो बह र कर्नाली :: अमित ढकाल :: Setopati
बाबु त्रिपाठी गजलकार/कवि
दिनेश अधिकारीको 'नीलो बह' कविता छ।
‘ए आम्मा ...! दाइ के गर्नु भा’को? झन्डै गा’को त गाडी भीरबाट। सकिन्थ्यौँ त हामी आठै जना।’
कुखुरा पनि तयार भैसकेको थियो, खुर्पा पनि अघिकै थियो होला!...खाना खाएर हामी गुराँसेबाट ओरालो लाग्यौं।‘अघि तपाईंहरूले चाल पाउनु भएन, गाडीको बे्रक फेल भो। मैले तपार्इँहरूलाई नभनेको, आत्तिनुहुन्छ भनेर। भन्न पनि भएन नि,’ गाडी चलाउने दाइ बोले। सातो गयो! तै बचिएछ!यत्ति भन्दा नभन्दै मैले गाडी रोक्नलाई अनुरोध गरेँ र भुईंमा पसारिएर लामो सास फेरेँ। ‘हामी आठ जना त एकै चिहान पो हुने रैछौँ त,’ आकाशतिर आँखा फर्काउँदै ड्राइभर दाइलाई धन्यवाद भनेँ।
रातको १०ः४५ बजे कालीकोटको लालुखुलालु पुग्यौँ।...अस्ती राती त जसोतसो टर्च बालेर भीर छिचोल्दै तुइन चढेर लालुखुलालु पुग्यौँ। तुइन चढ्ने बेलामा घरबाट फोन आएको थियो।
जवाफमा मैले भनेको थिएँ, ‘खै बत्ती छैन, एउटा टर्चको उज्यालोमा चार जना हिँडेका छौँ। भीरालो बाटो छ भन्नु भएको छ। अब केही छिनमा तुइन तर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। अहिले त कर्नाली सुसाएको बाहेक केही देखिँदैन। जताततै अँध्यारो छ। जताततै कालो छ। कालो छ कर्नाली।’...जाँदा बात गर्न नपाए पनि फर्कँदा तुइनको लट्ठा तान्दै गरेका एक दाजुसँग बात गर्न पाएँ। उहाँको दुई हात तुइनको लट्ठा समाइरहेको हुन्थ्यो। मुखको हाउभाउचैँ मेरो अनुहारमा आएर ठोकिन्थ्यो।
पर ... पर ... सम्म डुङ्डुङ्ति गन्हाइरहेछ
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २५, २०७४, ०२:५६:३८